Nin jaakadaha qarxa xirnaa oo isku qarxiyay xero ciidan oo ku taal Kismayo - Hablaha Media Network
Nin jaakadaha qarxa xirnaa oo isku qarxiyay xero ciidan oo ku taal Kismayo
HMN:- Nin xirnaa jaakaddaha loo adeegsado ismiidaaminta ayaa isku qarxiyay iridka hore ee xero ciidan oo ku taal magaalada Kismayo, ninkaasi oo askari ka tirsan nabadsugida uu ku qabtay halka laga galo xeradaasi ciidan ee nabadsugida Jubbaland degan tahay.
Qaraxa oo ahaa mid xoogganaa ayaa ka dhacay iridka xerada Koongo oo ah saldhigga ugu weyn ee ciidamada nabadsugidda Jubaland ay ku leeyihiin magaalada Kismaayo, waxaana ku dhintay labo qof oo mid ka mid ah ay aheyd gabar shan jir ah iyo qof kale oo rayid ah, waxaana dhaawac uu kasoo gaaray askarigii istaajiyay ninka qarxay iyo qof kale.
Madaxa laanta danbi baarista hay’adda nabadsugidda Jubaland Gaashaanle Axmed Muuse ayaa sheegay in weerarka uu fuliyay ruux isku soo xiray walxaha qarxa kaasoo markii uu istaajiyay askari ka tirsan nabadsugidda is qarxiyay.
“Ninka is qarxiyay waxaa marka hore ka shakiyay askari ka tirsan nabadsugidda, wuxuu ku amray in uu istaago oo shaatiga kor u qaado, marka uu dareemay in gacanta lagu dhigay ayuu is qarxiyay,” ayuu Gaashaanle Axmed Muuse.
Qaraxaan ismiidaaminta ah ma jirto cid sheegatay mas’uuliyadiisa, hasee ahaatee taliska nabadsugida Jubbaland ayaa weerarkaan ku tilmaamay in Al-shabaab soo maleegtay.